आजको तस्वीर : पहिरोले खल्तुबोट सम्म पुग्नपनि सास्ती ! – ebaglung.com
आजको तस्वीर : पहिरोले खल्तुबोट सम्म पुग्नपनि सास्ती !
२०७५ श्रावण ३, बिहीबार ०८:५७	Top News, अन्य समाचार
बुर्तिवाङ २०७५ साउन ३ । साउन १ गते देखी बुुर्तिवाङबासीमाथी आई परेको बिपतबाट यस क्षत्रका जनताले अझै पार पाउन सकेका छैनन् । अबिरल वर्षा सहितको पहिरोबाट बुर्तिवाङ बजार क्षतविक्षत बनेको छ । बुर्तिवाङबासीको छाती छिया छिया परेको छ । साउने सक्रान्तिको चाड मनाईरहँदा आईपरेको यो प्राकृतिक विपतले स्थानीयवासी बिचल्लीमा परेका छन्, घरबास गुमाएर स्कूलको भवनमा आश्रय लिन बाध्य छन् ।
पहिरो बगिरहँदा लामो र छोटो दूरीका सवारी साधनहरु चलेका छैनन् । बुर्तिवाङ बजार देखी झण्डै आधा घण्टा हिँडेर पहिरो पार गरेपछी खल्तुबोटमा पुगेर साना सवारी साधनहरुबाट यात्रुहरु गन्तव्य तिर गैरहेका छन् । बसहरु चलेका छैनन ।
सहकर्मी दिनेश शर्माले दिएको जानकारी अनुसार भिङगिठे देखी बुर्तिवाङको खल्तुबोट सम्म जीपले यात्रुहरु ओसार पसार गरिरहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग संग जोडिएका सहायक सडकहरु ठाउँठाउँमा भत्किएकाले सवारी ठप्प छ ।
बुर्तिवाङबाट सहकर्मी दीपक पराजुलीका अनुसार बुर्तिवाङ देखी खल्तुबोट सम्म ठुलो पहिरो गएकोले यात्रुहरुलाई हिँड्न समेत सास्ती छ । पहिरो पन्छाउने प्रयास भैरहेपनि पहिरो खस्नेक्रम नरोकिएकाले थप समस्या परेको छ । यात्रुहरु खल्तुबोट सम्म हिँडेरै पुगेका छन् र साना सवारी साधन जीपबाट गन्तव्य तिर गैरहेका छन् । भिङगिठे सम्म जीपमा गएर बस चढने गरेको यात्रुहरुले जानकारी दिएका छन् ।
तस्वीर-दीपक पराजुली, बुर्तिवाङ ।
खगेन्द्र विश्वकर्माकाे माैलिक सालैजाे मादलु बाेकेर सार्वजनिक
बाढी पहिरोले पु-याएको अपुरणीय क्षतिप्रति राजमो द्वारा दुःख व्यक्त !